‘सरकार धाँधली गरेर भएपनि उपनिर्वाचन जित्ने कोशिसमा छ’: डा. महत – newslinesnepal
प्रकाशित मिति : ३ मंसिर २०७६, मंगलवार २२:५३
काठमाडौं, ३ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चीन र भारतको सीमा विवादको कुरा जसरी आएका छन्् यसमा सरकारकै कमजोरी मुख्य कारण भएको आफूहरुको ठहर रहेको सुनाए ।
महतले वर्तमान सरकार पुरै असफल भएको दाबी गरे । ‘यो हामीले भनिरहेको होईन, आम जनता सबै निराश छन् । जनताको कुरा छोडौं, कम्युनिष्ट पार्टीकै स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नै असन्तुष्ट छन् । उहाँहरु यही उपनिर्वाचनको क्रममा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा र समर्थनमा उत्रिनुभएको छ । सबै मोर्चामा यो सरकार असफल छ। भ्रष्टाचार संस्थागत भैरहेको छ । राजश्वको व्यापक दुरुपयोग भैरहेको छ । सरकारले आफैं उपभोक्ता समिति बनाउने अनि आफ्नो मान्छेमार्फत बजेट प्रवाह गर्ने काम भैरहेको छ । समग्र रुपमा सरकार ठीक बाटोमा छैन् । परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सरकारको विश्वसनियता एकदमै कमजोर भैरहेको छ । लगानी आउन सकेको छैन् । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुदेखि अरु राष्ट्रहरुसँग हामीले हाम्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध विकसित गर्न सकेका छैनौं ।’ उनले चीन र भारतको सीमा विवादको कुरा जसरी आएका छन्् यसमा सरकारकै कमजोरीको कारणले भएको आफूहरुको ठहर रहेको सुनाए ।